Iwu Nzuzo | astroshopee.com - Ndị Ọzọ
Isi Ndị Ọzọ AMỤMA NZUZO
astroshopee Digital Media, LLC d / b / a astroshopee Industries, ndị mmekọ ya na ndị enyemaka (the 'astroshopee' , 'anyị' ma ọ bụ 'anyị' ) ji nzuzo nke ndị ọrụ na ndị debanyere aha anyị. Anyị na-agbasi mbọ ike ịkọwapụta otu anyị si anakọta ma jiri ozi gị, iji dobe ozi gị ma nyekwa gị nhọrọ bara uru. Iwu Nzuzo a ( 'Iwu' ) na-akọwa omume nzuzo maka www.astroshopee.com mkpokọta (the 'Ebe' ), nke ndị astroshopee nwere ma rụọ ọrụ. Iwu a pụtara iji nyere gị aka ịghọta ihe ozi astroshopee na-achịkọta, gịnị kpatara anyị ji anakọta ya na ihe anyị ji ya eme.
Ebughị saịtị ahụ maka ụmụaka n'okpuru afọ 13, anyị anaghị akpachara anya na-anakọta ozi nkeonwe n'aka ụmụaka n'okpuru 13. Ọ bụrụ na anyị amụta na anyị anakọtara ma ọ bụ nata ozi nkeonwe n'aka nwatakịrị nọ n'okpuru 13 na-enweghị nkwenye nke nkwenye ndị nne na nna, anyị ga-ehichapụ ozi ahụ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na anyị nwere ozi ọ bụla sitere na ma ọ bụ banyere nwatakịrị na-erubeghị afọ 13, biko kpọtụrụ anyị na nzuzo@astroshopee.org .
esi eme ihe na-amasị nwoke cancer na-ehi ụra
Nkwukọrịta ahịa ahịa na Shakesa ndị ọzọ. Nwere ike imelite mmasị gị n’ihe gbasara ịnweta nkwukọrịta ahịa sitere n’aka anyị, yana nkesa nke ozi nkeonwe anyị na ndị ọzọ. Nwere ike ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na nzuzo@astroshopee.org . I nwekwara ike pụọ na ịnweta nkwukọrịta ahịa email, site na isoro ntuziaka 'wepu aha' nke enyere na email ọ bụla ị nwetara n'aka anyị. Nwekwara ike ịgbanwe ọkwa ịkwanye na ekwentị mkpanaaka gị site na ngwaọrụ gị ma ọ bụ ntọala ngwa gị.
Ikike Nzuzo California. California Civil Code Nkebi nke 1798.83 na-enye ohere ka ndị ọrụ nke saịtị anyị bụ ndị bi na California rịọ ụfọdụ ozi gbasara ngosipụta nke ozi nkeonwe anyị na ndị ọzọ maka ebumnuche ahịa ha. Iji mee ụdị arịrịọ a, biko kpọtụrụ anyị na nzuzo@astroshopee.org .
Ebe Kuki: astroshopee.com
Jụ maka ozi nkeonwe anyị kpokọtara gbasara gị na ịntanetị site na saịtị nke edepụtara Nzuzo Nzuzo a ma ọ bụ iji dozie ozi nkeonwe dị otú ahụ, ị ​​nwere ike zitere anyị email nzuzo@astroshopee.org . Nwere ike ịrịọ ma nweta mwepụ nke onyinye Onye ọrụ gị site na emailing nzuzo@astroshopee.org na arịrịọ gị na ịkọwapụta Onyinye Ọrụ Onye Ọrụ ịchọrọ ịwepụ. Anyị nwere ike ghara ịnabata arịrịọ ịgbanwe ma ọ bụ hichapụ ozi ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị kwenyere na omume dị otú ahụ ga-emebi iwu ọ bụla ma ọ bụ iwu chọrọ ma ọ bụ mee ka ozi ahụ ghara ịdị na-ezighi ezi. Mwepụ nke Onyinye Ndị Ọrụ Gị na saịtị anaghị eme ka mwepụta zuru ezu ma ọ bụ nke zuru oke nke ụdị Ntinye Onye Ọrụ site na Saịtị dị ka nnomi nwere ike ịdịrịrịrịrịrịrị ihu na nchekwa na ibe edokọbara ma ọ bụ enwere ike depụtaghachi ma ọ bụ chekwaa ndị ọrụ saịtị ndị ọzọ. Nwere ike wepu aha na akwụkwọ akụkọ ọ bụla ma ọ bụ ozi ịntanetị nkwalite dị iche iche n'oge ọ bụla site na ịpị njikọ 'wepu aha' nke enyere na nkwukọrịta dị otú ahụ. May nwere ike ịpụ na nkwukọrịta metụtara saịtị, dị ka nkwenye akaụntụ, ịzụta nkwenye na ozi nhazi, ọ bụrụhaala na ị debanyere aha na saịtị ahụ.
Nchegbu Nzuzo. Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu ọ bụla ma ọ bụ mkpesa banyere nzuzo na saịtị, biko kpọtụrụ anyị na astroshopee Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA ma ọ bụ zitere anyị email na nzuzo@astroshopee.org . Anyị ga-eme ike anyị niile iji zaghachi gị n'oge na ọrụ ọkachamara iji zaa ajụjụ gị ma dozie nsogbu gị. Und astroshopee Digital Media, LLC. Ikike niile echekwabara. Purpleclover na Purpleclover.com bụ ụghalaahịa nke astroshopee Digital Media, LLC
anwụ na pisces ọnwa na taurus
Na-ezitere anyị ozi na: nzuzo@astroshopee.org
Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu ọ bụla ma ọ bụ mkpesa banyere nzuzo na saịtị, ụzọ anyị si anakọta ma jiri ozi nkeonwe gị, nhọrọ gị na ikike gị banyere iji ya, ma ọ bụ chọọ ịme ikike gị n'okpuru iwu California, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị na astroshopee Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood, CA, 90069, USA, zitere anyị email na nzuzo@astroshopee.org ma ọ bụ kpọọ na 1-866-522-5025.
astroshopee Digital Media, LLC d / b / a astroshopee Industries, ndị mmekọ ya na ndị enyemaka ('astroshopee', 'we', 'us', ma ọ bụ 'anyị') ji nzuzo nke ndị ọrụ na ndị debanyere aha anyị kpọrọ ihe. Anyị na-agbasi mbọ ike ịkọwapụta otu anyị si anakọta ma jiri Ozi gị (dị ka akọwara n'okpuru), iji mee ka ozi gị dị nchebe ma nye gị nhọrọ ndị bara uru. Amụma nzuzo a ('Iwu') na-akọwa omume nzuzo maka www.astroshopee.com weebụsaịtị ('Saịtị'), nke nwere, ma rụọ ya, n'ozuzu ma ọ bụ na akụkụ, site astroshopee. Iwu a na-akọwa etu astroshopee si achịkọta, jiri ya ma gosipụta Ozi gị dịka onye njikwa data.
A na-akwado saịtị anyị na United States. Nke a pụtara na anyị ga-edozi Ozi anyị nakọtara na United States, mba nwere ụkpụrụ nchekwa nchekwa dị ala karịa European Union. Otú ọ dị, ka anyị na-enye ndị bi na European Union na ọrụ anyị, astroshopee dịkwa n'okpuru iwu nchekwa data Europe, ọkachasị EU General Data Regulation (GDPR).
astroshopee nọ na nhọpụta onye nnọchi anya EU ga-eme ka ị mata site na mmelite emelitere nke Iwu a ozugbo a họpụtara onye nnọchi anya EU.
Ebughị saịtị ahụ maka ụmụaka n'okpuru afọ 16, anyị anaghị akpachara anya na-anakọta ozi nkeonwe n'aka ụmụaka n'okpuru afọ 16. Ọ bụrụ na anyị amụta na anyị anakọtara ma ọ bụ nata ozi nkeonwe n'aka nwatakịrị nọ n'okpuru 16 na-enweghị nkwenye nke nkwenye ndị nne na nna, anyị ga-ehichapụ ozi ahụ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na anyị nwere ozi ọ bụla sitere na ma ọ bụ banyere nwatakịrị na-erubeghị afọ 16, biko kpọtụrụ anyị na nzuzo@astroshopee.org
Tebụl dị n'okpuru nwere nkọwa gbasara oke nke usoro nhazi usoro iwu dị n'okpuru GDPR nke astroshopee na-adabere mgbe ọ na-anakọta Ozi:
Nkwenye: ebe ị kwere ka anyị jiri data nkeonwe gị (ọ bụrụ na a ga-ewetara gị ụdị nkwenye maka ụdị ojiji a yana ị nwere ike ịwepụ nkwenye gị oge ọ bụla site na ịnye nzuzo@astroshopee.org
Anyị na-eji Ozi anyị nakọtara iji chọpụta, nyochaa, ma gbochie ọrụ ndị na-emebi usoro ojiji anyị, nwere ike ịbụ aghụghọ, mebie ikike nwebisiinka, ma ọ bụ iwu ndị ọzọ, iji rube isi n'iwu chọrọ, yana iji kpuchido ikike anyị na ikike na nchekwa nke ndị ọrụ anyị na ndị ọzọ. Anyị nwekwara ike ịnye data nkeonwe gị na onye ọ bụla nwere ike inweta ma ọ bụ itinye ego na akụkụ ọ bụla nke azụmaahịa astroshopee maka ebumnuche nnweta ma ọ bụ itinye ego ahụ.
astroshopee na-achịkwa Ozi gị ma bụrụ onye njikwa data dịka akọwara na GDPR. Anyị nwere ike ịkekọrịta ma gosipụta mkpokọta na de-amata Ozi banyere ndị ọrụ anyị na-enweghị mmachi.
Commissionfọdụ mba na-abụghị EEA ka ndị European Commission kwadoro ka ha na-enye nchebe zuru oke dị ka iwu nchekwa data EEA. Iwu nchebe data EU na-enye astroshopee ohere ịnyefe data nkeonwe na mba ndị dị otú a. Biko kpọtụrụ anyị na nzuzo@astroshopee.org ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ otu usoro nchebe anyị na-etinye n'ihe metụtara mbupụ nke ozi nkeonwe gị.
Nwere ike imelite mmasị gị n’ihe gbasara ịnweta nkwukọrịta ahịa sitere n’aka anyị, yana nkesa nke ozi nkeonwe anyị na ndị ọzọ. Nwere ike ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na nzuzo@astroshopee.org . I nwekwara ike pụọ na ịnweta nkwukọrịta ahịa email, site na isoro ntuziaka 'wepu aha' nke enyere na email ọ bụla ị nwetara n'aka anyị. Nwekwara ike ịgbanwe ọkwa ịkwanye na ekwentị mkpanaaka gị site na ngwaọrụ gị ma ọ bụ ntọala ngwa gị.
anwụ na ọnwa na scorpio
capricorn nwoke na capricorn nwanyị mmekọrịta
Nchegbu Nzuzo . Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu ọ bụla ma ọ bụ mkpesa banyere nzuzo na saịtị, biko kpọtụrụ anyị na astroshopee Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9NkeAla, East Hollywood, CA, 1312312, U.S.A. ma ọ bụ zitere anyị email na nzuzo@astroshopee.org. Anyị ga-eme ike anyị niile iji zaghachi gị n'oge na ọrụ ọkachamara iji zaa ajụjụ gị ma dozie nsogbu gị.
Und astroshopee Digital Media, LLC. Ikike niile echekwabara. astroshopee na astroshopee.com bụ ụghalaahia edenyere nke astroshopee Digital Media, LLC
Hapụ a Virgo Woman: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara
adọta aries nwoke libra nwanyị
Taurus na taurus hụrụ ịhụnanya 2015
agu nwoke na dragon nwanyi ndakọrịta
ogosiputa na oria mmadu huru gi n'anya
akara zodiac maka Nọvemba 9
esi adọta ụmụ nwanyị nwere ọrịa kansa
nwanyi gemini na libra nwoke enyi